Cargo (2020) | MM Movie Store
India ကားကောငျးမြှျောလငျ့နတေဲ့သူတှလောပါပွီဗြား….လူသားတှနေဲ့နတျဆိုးတှဟော အရငျတုနျးက စဈပှဲပေါငျးမြားစှာဆငျနှဲခဲ့တယျ…အသကျပေါငျးမြားစှာဆုံးရှုံးမှုသာ ဖွဈခဲ့လတေော့ နောကျပိုငျးမှာ ငွိမျးခမျြးရေးသဘောတူစာခြုပျပွုလုပျခဲ့ကွတယျ….
အဲ့ဒီနောကျ နတျဆိုးတှဟော သဆေုံးသှားတဲ့လူသားတှရေဲ့ဝိညာဉျတှကေိုအစီအစဉျတကထြုတျယူ ကူးပွောငျးပေးပွီးကူညီခဲ့ကွပါတယျ..သူတို့ဟာအာကာသထဲကို လှနျးပြံယာဉျတှလှေတျတငျပွီးတော့ သဆေုံးမှုနရောခကြူးပွောငျးပေးရေးဌာနဖှငျ့ပွီး..ကမ်ဘာပျေါကသသှေားတဲ့လူမှနျသမြှကို တဈခွားတဈဘဝစီကို ကူးပွောငျးပေးပါတယျ.
.အာကာသယာဉျတဈစီးမှာကူးပွောငျးဖယျရှားပေးခွငျးလုပျကိုငျနတေဲ့ နတျဆိုးတဈယောကျဖွဈသူပရတျဟတျစသာ ဟာဒီအလုပျကိုလုပျဆောငျနတောနှဈပေါငျးအတျောကွာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ အနားယူဖို့လိုလာပါတယျ….
India ကားကောင်းမျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေလာပါပြီဗျား….လူသားတွေနဲ့နတ်ဆိုးတွေဟာ အရင်တုန်းက စစ်ပွဲပေါင်းများစွာဆင်နွှဲခဲ့တယ်…အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးမှုသာ ဖြစ်ခဲ့လေတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်….
အဲ့ဒီနောက် နတ်ဆိုးတွေဟာ သေဆုံးသွားတဲ့လူသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအစီအစဉ်တကျထုတ်ယူ ကူးပြောင်းပေးပြီးကူညီခဲ့ကြပါတယ်..သူတို့ဟာအာကာသထဲကို လွန်းပျံယာဉ်တွေလွှတ်တင်ပြီးတော့ သေဆုံးမှုနေရာချကူးပြောင်းပေးရေးဌာနဖွင့်ပြီး..ကမ္ဘာပေါ်ကသေသွားတဲ့လူမှန်သမျှကို တစ်ခြားတစ်ဘဝစီကို ကူးပြောင်းပေးပါတယ်.
.အာကာသယာဉ်တစ်စီးမှာကူးပြောင်းဖယ်ရှားပေးခြင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ နတ်ဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်သူပရတ်ဟတ်စသာ ဟာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နေတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အနားယူဖို့လိုလာပါတယ်….